မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဘီလျံ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
အစိုးရ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ဘီလျံ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိ
ဧရာဝတီ Tuesday, 23 August 2011 19:25 (ပေးပို့ သူ ဗမာ့သွေး)
ယနေ့ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ နှစ်ပေါင်း ၂၄ နှစ် ကျော်ကြာမှ ပထမဆုံး ကြေညာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အထွေထွေ ရသုံးခန့်မှန်းငွေစာရင်း တင်သွင်းရာတွင် ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ခုနှစ် စာရင်း အတွက် ကျပ် ဘီလီယံပေါင်း ၂ ထောင်ကျော် လိုငွေပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်စဉ်အလိုက် ကြေညာရသော ရသုံးမှန်းခြေစာရင်းအရ နိုင်ငံတော် တရပ်လုံး၏ ရငွေ စုစုပေါင်း ပမာဏမှာ ၅၇၈၁. ၇၃၈ ဘီလျံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း သုံးငွေ ပမာဏမှာ ၇၉၈၃.၁၈၈ ဘီလျံ ဖြစ်သည့်အတွက် ဘတ်ဂျတ် (ရသုံးမှန်းခြေ) လိုငွေပြမှုသည် ၂၂၀၁. ၄၅၀ ဘီလျံ ဖြစ်နေသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ အမှတ်စဉ် ၁/၂၀၁၁ ကို ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်တိုးက ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဖတ်ကြား တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လိုငွေပြမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြမှု မရှိပေ။
“နေ့လယ်ပိုင်း ၁ နာရီမှာ စတဲ့ အချိန်မှာ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ် ၁၁ က ဦးတင်ယုက မေးမြန်းတယ်။ တိုင်း၊ ဒေသကြီးများနဲ့ ပြည်နယ်များရဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ ဆေးဝါး မလုံမလောက်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို ကျန်းမာရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တာကို မေးပါတယ်၊ အဲဒါကို ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးက ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က ရှင်းပါတယ်။ ဘတ်ဂျက် အခြေအနေအရ လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်းပေါ့” ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တဦး ဖြစ်သူ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
တိုင်းပြည် အသုံးစရိတ်များတွင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဌာနတို့အတွက် အသုံးစရိတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းအလွန် နည်းပါးပြီး ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် မည်၍ မည်မျှ သုံးစွဲကြောင်း တင်ပြသွားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၀န်ကြီးဌာနများနှင့် နိုင်ငံတော် အဖက်ဖက်က အသုံးစရိတ်ပြ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်တမ်း အရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ်သည် ကျပ်ငွေ ၁၃၁၈ ဘီလျံ ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ် နိုင်ငံတော်၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ကျပ် ၆၇၇၂ ဘီလျံကျော်ရှိရာ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ကျော် သုံးစွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုနှစ် စာရင်းအရပင် ပညာရေးအတွက် အသုံးစရိတ်မှာ ၄.၅၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ၁.၃၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ လူမှုရေး၊ ကူညီ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေးတို့အတွက် ၀. ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ သုံးစွဲကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ် အလွန် များပြားခဲ့ပြီး လက်နက် ခဲယမ်းများ၊ ရဟတ်ယာဉ်များ၊ တိုက်လေယာဉ်များ ၀ယ်ယူခြင်း၊ အနုမြူစီမံကိန်းနှင့် နေပြည်တော် မြို့သစ် စီမံကိန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း တို့ကြောင့် ယခုတက်လာသော အရပ်သားအစိုးရလက်ထက်တွင် ပမာဏကြီးမားသည့် နိုင်ငံတော် ရသုံးမှန်းခြေ( ဘတ်ဂျက်) လိုငွေပြနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု လေ့လာသူများက ထောက်ပြကြသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:14 PM
အမြတ် သေချာတဲ့ စီးပွာရေးလုပ်ငန်း
ဂီရိဒေသ ပြည်သူများ အသုံးပြုသော ချောင်းကို စစ်တပ်က ...
ဂျပန် ဝန်ကြီးချူပ်သစ် ရွေးလိုက်ပြီ
သူလျှိုလုပ်ပေးသည့် တရုတ် တာဝန်ရှိသူများကိစ္စ ပေါက်ြ...
ဂဒါဖီ ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေ အယ်လ်ဂျီးရီးယားမှာ ခိုလှုံ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အတန်အသင့် ပွင့်လာ
ဘတ်ဂျက်စစ်ဆေးရေး ဖွဲ့စည်းဖို့အဆို လွှတ်တော်မှာ ပယ်ခ...
တောင်ယာစောင့် ရွာသား ၃ ဦးအား မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်တာဆွဲ ...
ထားဝယ်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းကြောင့် ရွာ ၅ ရွာ အရင်ဆုံး...
မြစ်ဆုံအရေး လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုကြမည်
ကျပ်ငွေဈေးချရန် တရားမဝင်ကားများ ဒေါ်လာဖြင့်ဒဏ်တပ်မ...
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် များစွာ သက်ရောက်စေမည့် စီမံကိန...
အမှန်တရား များနဲ့The Lady လာပြီ
ငါပြောသလိုလုပ်...ငါခိုးတာတွေ လာစစ်မနေနဲ့ 
တရုတ်ကားတွေ ရောင်းကောင်းအောင်လို့ ..
တကယ့် တရားဝင် မြန်မာ့ ပင်လယ်ဒမြ
Someone is hiding
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားသွားသူ ထောင်တနှစ်ခွဲကျ
Under democracy government
ရေကာတာတည်ဆောက်မှု ရပ်တန့်ရေး စုပေါင်း လက်မှတ်ထိုးနေ...
တရုတ်နည်းပညာ၊ ဧရာဝတီနဲ့ မြန်မာတမျိုးသားလုံးရဲ့ကံကြ...
ဟန်းဖုန်းအသုံးပြု၍လုပ်ကိုင်သည့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်...
"fierce battle Myitkyina"ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရှိ...
မြန်မာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယို ဖိုင် download...
ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင် ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း။
မြန်မာပြည်၏ မိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သို့ 
ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ “လူလ”
ကြွေကြတော့မယ့် ပန်းတပွင့် ( ၀ါ ) ဧရာဝတီ
လူ့အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လွှတ်တော် အမတ်...
ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်း ဒေါ်စု ပါဝင်
အစိုးရသစ်ရဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အ...
စရဖ ညွှန်ချုပ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ် စိုးရှိန်ကိုခန့်အပ်
စစ်မြေပြင်မှ ရွာသူရွာသား ၅၀ဝ ကျော် တောနက်ထဲ ဝင်ရော...
တာတမံ ပြန်ကျိုးပျက်၍ လယ်ဧက ၁၇၀၀ ကျော် စပါးမစိုက်ပျ...
လစ်ဗျားမှာ နေတိုးတာဝန် မပြီးဆုံးသေး
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ရောက်ရှိစဉ် တကိုယ်တော် ...
ရှေ့နေကွန်ယက်ဝင် တဦး လိုင်စင်သိမ်းခံရ
ဆွီဒင် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ NLD နဲ့ ဆွေးနွေး
တည်ဆဲဥပဒေ တချို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ လွှတ်တော်မှာ ...
တည်ဆဲဥပဒေတွေ ပြုပြင်ဖို့ ကင်တားနား တိုက်တွန်း
ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် လိုအပ်ချက်၏ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းသ...
PULANG KE NEGARA ASAL = Return To Country Origin
ဘုရားမြေ နိုင်ငံတော် ခေါင်းစဉ်တပ် သိမ်းပြီး ပုဂ္ဂလိ...
ကျပ်ငွေဈေး ထိုးတက်သဖြင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ရပ်
ဆင်းရဲ မွဲတည်မူ လျှော့ချရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ရခိုင...
မြန်မာ့စီးပွားရေး အကျပ်တည်း အချို့ဖြစ်ခဲ့ဟု သမ္မတ ဥ...
ဒေါ်စုနှင့် ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမှု ရလဒ်ကောင်းထွက်ရန...
မီဒီယာများရဲ့ ဝေဖန်မှု ခံယူသွားမည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းေ...
တိုင်းမှူးနှင့် စစ်အရာရှိကြီးများ ယာဉ်တန်းကို DKBA ...
မြန်မာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာ
စကော်ပီယံဂိုဏ်းသားများ ၊ ပြိုင်ကားဂိုဏ်း နှင့် နေေ...
တိဗက်တွေအတွက် သုခဘုံက ဘယ်တော့လဲ..
ကျေးလက်လူထုအား ကာဗာလုပ် ရှေ့တန်း တိုက်ပွဲမှ မြန်မာ...
‘အစိုးရက မုန်းတီးရေး စကားသာ ပြောနေ’ ဟု KIO ဝေဖန်
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို အမေရိကန်က အလေးထ...
သမ္မတ၏ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို အယုံကြည်မရှိဟု တိုင်းရင်းသား ...
ဆီးရီးယား သမ္မတ ဆင်းပေးဖို့ အနောက်နိုင်ငံတွေ တောင်း...
အမျိုးသား သတင်းဆု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း
ဧရာဝတီမြစ်ရေကာတာ စီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရေး သမ္မတထံေ...
ရွှေတွင်းမြေပြိုလို့ သေဆုံးသူ များပြား
ဦးအောင်ကြည်နဲ့တွေ့ဆုံမှု ကောင်းသော စတင်ခြင်းလို့ေ...
နိုင်ငံတော် သမ်မဒကျီး မှ ပေးစာ
ကျနော်တို့လည်း ဧရာဝတီကို ချစ်ပါတယ် အီး ဟီးဟီး
အ၀င် အထွက် မျှပါစေသား
ပြည်ပရောက်များ ပြန်လာရန်နှင့် လက်နက်ကိုင်များ လက်န...
ဌာနေပြန်ရေး နိုင်ငံရေး လွတ်လပ်ခွင့် လိုအပ်ဟု ပြည်ပ...
ကရင်နီပြည်တိုက်ပွဲ အစိုးရတပ်မှ ဒု-တပ်ကြပ် ကျဆုံးဟု...
ပြည်ပ NGO များ၏ ကျန်းမာရေး အကူအညီကို လက်မခံရန် ချင...
‘Crossing Salween’ ဇာတ်ကား လော့စ်အင်ဂျလိစ်တွင် ပြမ...
စစ်ရှောင်နည်း နယ်စပ်တွင် လေ့ကျင့်
ဆောင်ပုဒ်ဖျက်ရုံဖြင့် မီဒီယာလွတ်လပ်မည်မဟုတ်ဟု မြန်...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ငြိမ်းချမ်းရေး တံခါးဖွင့်ထားကြောင...
နေပြည်တော် စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ ကို ပညာရှင်တွေ အ...
အမေရိကန်အရာရှိက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးအောင်ကြည်...
ဒုက္ခသည်ကို မကူညီရန် အစိုးရပိတ်ထားသည်ဟု ကချင်အမျိုး...
မြန်မာ့ တပ်မတော် အလုံးစုံပြိုကွဲပျက်စီးဖို့နီးပြီေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေက ပဲခူးတိုင်...
ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှင့် အဓိကရုဏ်းကြားက ဆက်မျဉ်းလေးတစ်ေ...
ပဲခူးမြစ်ရေကြောင့် လယ်မြေဧကထောင်ချီ နလန်မထူနိုင်အေ...
သမ္မတက နေပြည်တော်တွင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံ...
တရုတ်နယ်စပ် မြန်မာစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကို KIA နှင့် SSA ပ...
SSPP/SSA နှင့် အစိုးရတပ်တိုက်ပွဲ ပြင်းထန် မြန်မာ ဒ...
မွန်နှင့် ကရင်တွင် ၂ နှစ်အတွင်း မြေယာ ဧကတစ်သောင်း ...
ကွန်တိန်နာဖြင့် ကားခိုးသွင်းမှုကို အရေးယူပြီ
စစ်ထောက်ချုပ်နှင့် စစ်ရေးချုပ်တို့ကို ရာထူးချထား